သြဂုတ်လတွင် Samsung Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ Androidsis
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အာရုံစိုက်မှုအားလုံးကိုခံစားနေရသည်။ ၎င်းသည်လာမည့်သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်နယူးယောက်၌ဖြန့်ချိမည့် Galaxy Note9၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သောနောက်ထပ်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုဆိုရင်မီးမောင်းထိုးမထွက်ခင်မင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမြဲတမ်းသတိမပြုမိအောင်လုပ်ပါ။ Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 အတွက်ယခုလနှင့်သက်ဆိုင်သော update ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမနီရှိ OTA မှတဆင့်ဖြန့်ဖြူးတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒေသတွင်းရှိအခြားနိုင်ငံများသို့ပျံ့နှံ့သွားရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဘယ်သူ၏ရည်ညွှန်းကုဒ်မှတက်နေထိုင်သည်အဆိုပါ update ကို FXXU2BRGA အဲဒါကိုဖော်ထုတ်နှင့်အတူ, ဒီလရဲ့လုံခြုံရေး patch နဲ့ကိုက်ညီ, ဇူလိုင်လနှင့်သက်ဆိုင်သော patch ကိုဖြန့်ချိခဲ့သောကြောင့်, ငါတို့ပြုံးစေသည်တစ်ခုခု။ ဤမြန်နှုန်းနှင့်အချိန်တိုအတွင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွာခြားမှုသည်ယခင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြန့်ဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်နှောင့်နှေးမှုများအတွက်ထုတ်လုပ်သူထံမှလျော်ကြေးပေးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ တခါမှာ ၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်.
အတူတူပင်, ဒါဝေးနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းအတွက်မရရှိနိုင်ပါသော်လည်း, OTA ကနေတစ်ဆင့်ဥရောပတစ်ခွင်မှာပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မယ် သို့မဟုတ်, ပျက်ကွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်။ သင်၏ရောက်ရှိမှုသည်အနည်းငယ်ပိုကြာနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အခြားဒေသများရှိအခြားနိုင်ငံများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
အခြားသတင်းများ Samsung Galaxy Note9ကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသေးပါဘူး
သင်ပြင်သစ် (သို့) ဂျာမနီနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ patch မရှိသေးပါကစိတ်မပူပါနဲ့၊ များသောအားဖြင့်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာမတူညီပါဘူး။ နာရီသို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ update ကသင်၏ Galaxy တွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ကSဂုတ်လနောက်ဆုံးထုတ် Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 အတွက်ဖြန့်ချိလိုက်သည်
Xiaomi Mi MIX 2S သည် Android P သို့တိုက်ရိုက် update လုပ်လိမ့်မည်